Rum vs Rome - Land Of Punt
Qolyaha Sacuudiga kataliya ee isugujira wadaada iyo boqortooyada Al-saud ayaa siweyn u khalad fahmay xadiis nabi Maxamed cs lagasoo wariyey oo inoo tilmaamaya in msulimiintu xulufo lasamayndoonan ‘Rum’. Carabta sunniga ubadan khasatan kuwa kunool dalalka nadaamka boqortooyo lagu xukumo ayaa markay deefadaynayaan shiicada garabna siinayan kiristanka iyo yahuuda wadasocda xadiiskan sooqata oo muslimiinta usheega qolada xulufada lala samayndonan “Rum” ay yihiin dhinaca kiristanka iyo yahuuda wadasocda Christo-judeo alliance ee galbeedka. Sucuudiga iyo inta wadasoctaba ayaa iyagoon dhankaa iyo dhanqaa midna eegin xadiiska u inoogu fasira ‘Rum’ inaytahay magaalada “Rome” ee Talyaaniga kutaal. Halkaa waxaad ka fahmay in qolyaha sidaa lihii macanaha xadiiska toos inoogu soo waarideen oo aanayba waxkale eegin. Turjumada quraanka/axaadista iyo fahamka saxda ah ayaa muhiima inaan lagategin si’aan khalad sidan ookale ah loogu dhicin.
Suurad dhan ayaa sidata magaca ‘Rum’ oo musliinta magacan iyo taarikhda lahalmaasha kuma cusba waxaan muhiim ah markaad masalo diiniya ah doonaysid inaad wax ka ogaatid xaqiiqa raadiska kabilaabay Quraan kareemka dabadeed ugasii gudubtid mawduucayda kale ee kulaxoojinaya fahamka saxda ah. Suraada ‘Rum’ waxay soodegtay oo nabi Maxamed cs lasoo gaadhsiyey wakhti caalamka laba awoodod kajiraan oo kala ahaa Persian Empire (Iran) iyo Banzantine/Roman Empire. Wakhtigaa Iraaniyiintu waxay haysteen diinta Zoroastian (Dab caabud) halka Romanku ahaayen kiristaan (ehlul-kitaab). Ilaahay sw wuxuu nabi Maxamed cs kuwargaliyey dhacdo markaa taagnay oo dhaxaysay labadan quwadood lakinse aan wali natijo lagukala calafqaato laga gaadhin oo ahayd in labadan qolo ee midna shaydaanka xulufada kasamaystay dhankalena kitaabka samaawiga ah watay in dagaal dhexmaridoono bariga dhexe ee masaboyoomiya. Nabi Maxamed cs, Ilahaay wuxuu usheegay in qolada kitaabka samaawiga ah sidataa (kiristanka) ay guulaysanayaan sanado kooban gudahood. Waa kii hogaamiye Hercules oo cidaan geeska afrika kayimi dhabarjabinta kusameeyey qolyahii Iraanta ahaa sidaana guushu kuraacday imbaradooriyadii Romanka. Wakhtigaa iyo dhacdadaa muslimiintu waxay lajireen qolyaha eblulkitaabk ee imbradooriyada romanka oo ‘Rum’ looyaqaanay sida quraanka iyo axaadista kusugan.
Rome waa magaalado madaxda talyaaniga. Muslimiinta ayaa jabiyey boqortooyadii Romanka oo saldhigoodu ahaa konstantiniya ‘Istanbul’ kunataalay xarunta wayn ee kiristanka ‘Haga Sofia’ waxayna qabsadeen degaamadii kiristanku xukumijirtay. Tariikhda diinta kiristanka markaad eegtid waxaa dareemay in dhexdooda khillaf jiray oo madaxa kiristanka oo markaa Mascow iyo dalalka bariga yurub degenaa iyo garabkale madaxbanaani doonayey inay is hayaan. Qoloda madax baanida doonaysay ayaa laga aminsanaa inay isbedel ka dhexwadaan kiristanka sunniga ah oo khuraafad wakhti jaahiligii laga yaqiinay yurub galbeed kusoo darayaan kiristanka sunniga ah waxayna kusheegijireen qolyo bidco faraha kulajira. Qolyahaa bidcada wada ayaa markii danbe xoogaystay oo labaxay katoolig “chatolic” saldhigna ka samaystay magaalada Rome ee Talyaaniga.
Chatoligu waa farqad ka dilaacday kiristanka samaawiga ah ee quraanka iyo axaadistu inoo sheegen ‘orthodox Christian’ waana quraafadlayal (mathrism) ka leexday kitaabka injiilka jeebkoodana kalasoo baxay in nabi ciise sadex yahay, ina Ilaah hadana ilaahay inankisa marka ugu danbaysa Ciise noqdo ruux duusha (Trinitiga chatoliciga waxaad kahelay- surada al-maida) qolyahaas ayaa magaalada Rome degen waxayna ka dageen kurtin ama goob caan ahayd oo quraafadlayaashi/sixiroolayaashi reer yurub degi jireen, The Vatican.
Hadii tarikhda iyo turjimada saxda lasoo bandhigin waxaa suurogal ah inaanad xaqiida mawduuca helin majo habaabina kugu dhacdo oo aad mawduuca akhrisamanka fahmi kariweydo. Silamid ah markaad mawduuca fahamtid waxaa kaloo inoo soo baxay in carabtu siiba qolyaha sacuudiga fadhiyaa ay majara habaabin wadaan oo meel aan loosocon inoo wadaan iyagoo dano gaar ah kale. Cida aad xulufada noqonaysa waa kiristanka kitaabka samaawiga ah sita ee maha qolyaha doolarka sameeya, waxayna xulufo la’samayndoonan qolyaha muslimiinta saxda ah ee wax fahamsan.
Yaa iminka Rum xulufo la ah? Yaase Rome xulufo la ah?
katoolig katoolig iyo orthodox kiristanka labada kiristan maxay kalayihiin rome rum